၂၀၁၉ ခုနှစ် နွေရာသီအမီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် မြင်းခြံ ၉၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့် ၂၂၅ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည့်သတင်း
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၄ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြနှင့် နှစ်အလိုက် တိုးတက်သုံးစွဲလာမည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လာမည့် နွေရာသီတွင် တိုးတက်သုံးစွဲလာမည့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ တောင်သာမြို့နယ်တွင် ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီဖြစ်သော VPower Holding Limited မှ Independent Power Producer (IPP) , Build - Operate - Own (BOO) စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် ၉၀ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းနိုင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်း တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ရှင်းလင်းဆောင်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် VPower Holding Limited ၏ တာဝန်ရှိသူတို့မှ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးမှ လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ခဲ့ပါသည်။
မြင်းခြံ ၉၀ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းသည် ပြည်တွင်းထွက် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သော ရွှေကမ်းလွန်မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တစ်ရက် ကုဗပေ ၂၀ သန်းကို အသုံးပြုပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် နွေရာသီအမီ ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကို အချိန်တိုအတွင်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ ထွက်ရှိလာသောဓာတ်အားကို မြင်းခြံ ၁၃၂ ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံမှတစ်ဆင့် မြင်းခြံ၊ တောင်သာ၊ ငါန်းဇွန်၊ နွားထိုးကြီးနှင့် ညောင်ဦးမြို့နယ် များသို့လည်းကောင်း ဓာတ်အားပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူး ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်တပ်ဆင်အင်အားမှာ (၁.၅၆) မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်အားပေးစက် (၆၄) လုံးဖြင့် စုစုပေါင်း (၉၉.၈၄) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး အာမခံထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ဓာတ်အားပမာဏမှာ (၉၀) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်၍ ဒီဇိုင်းအရ တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ ယူနစ်သန်းပေါင်း (၆၃၀) ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်တွင် Sembcorp Myingyan Power Co.,Ltd. မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ၂၂၅ မဂ္ဂါဝပ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ရှင်းလင်းဆောင်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် Sembcorp Myingyan Power Co.,Ltd. ၏ တာဝန်ရှိသူတို့မှ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးမှ သိရှိလိုသည်များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ များအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
၂၂၅ မဂ္ဂါဝပ် မြင်းခြံသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ဓာတ်အားဝယ်ယူရေး သဘောတူစာချုပ်ကို ၂၉-၃-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ပထမ အဆင့်အနေဖြင့် (၁၄၄) မဂ္ဂါဝပ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ (၇) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် (၈၁) မဂ္ဂါဝပ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂)ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း စီးပွားဖြစ်စတင်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် ခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ စုစုပေါင်း စက်တပ်ဆင်အင်အားမှာ (၂၃၀) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်ပြီး အာမခံထုတ်လုပ်နိုင်မည့် ဓာတ်အားပမာဏမှာ (၂၂၅) မဂ္ဂါဝပ်ဖြစ်၍ ဒီဇိုင်းအရ တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု မှာ ယူနစ် သန်းပေါင်း (၁၆၇၅) ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှဓာတ်အားကို ၂၃၀ ကေဗွီ မြင်းခြံသံမဏိ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံမှတစ်ဆင့် ၂၃၀ ကေဗွီ သပြေဝ-မြင်းခြံသံမဏိ ဓာတ်အား လိုင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်းသို့ ချိတ်ဆက်၍ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူး ပေးလျက်ရှိသည့်စက်ရုံ ဖြစ်ပါသည်။